Ungayiphelisa njani inkqubo noMphathi weSebenzi yeWindows
Ngamanye amaxesha uyalelwa ukuba uyeke inkqubo, okanye mhlawumbi ukhuthazwa ukuba uphelise inkqubo yokusombulula iingxaki kwikhompyuter yakho. Xa ezo mfuno zivela, landela la manyathelo okuthintela inkqubo ngokusebenzisa uMphathi woMsebenzi:
Bizani uMphathi oMiselweyo.
Ukubiza uMphathi woMsebenzi, cinezela Ctrl + Shift + Esc.
Cofa kwiinkqubo zeTebhu.
Khetha inkqubo ofuna ukuyiphelisa.
Kuyanceda ukuba ucofe isihloko segama lomfanekiso ukuhlela iinkqubo ngokwe-alfabhethi.
Cofa iqhosha lokuPhela kokuphela.
Ibhokisi yencoko yababini yesilumkiso iyavela; Ukuphelisa inkqubo akufuneki kuthathwe kancinci.
Cofa iqhosha lokuPhela kweNkqubo kwiWindows Window yesilumkiso sefestile.
Vala iwindow yoMphathi woMsebenzi.
Umzekelo olungileyo wokulandela la manyathelo kukubulala inkqubo eqhuba i icon kwindawo yesaziso. Umzekelo, i-icon kwindawo yesaziso inokulawula iimpawu ezizodwa zokubonisa. Awunakufumana le nkqubo kwi-tab yezicelo, kodwa ikho kwiinkqubo zeTebhu.
Icebo lokufumanisa ukuba yeyiphi inkqubo eyeyophawu kwindawo yesaziso kukuba ngandlela thile ufumane i icon ukubonisa iwindow. Umzekelo, cofa ekunene kwi icon ukusebenzisa i Show okanye Bonisa imenyu yemiyalelo. Emva kokuba ivuliwe, ungalandela la manyathelo kwiWindows Task Manager ukufumana le nkqubo inikiweyo:
ezimhlophe oblong ip 109
Cofa ekunene igama lesicelo kwithebhu yesicelo.
Khetha ukuya kwiNkqubo kwimenyu emfutshane.
Cofa iNkqubo yokuPhela iqhosha kwiWindows Task Manager, emva koko uphinde uqinisekise ukuphela kwenkqubo.
Inkqubo ihambile, njengoko kunjalo nendawo yendawo yokwazisa. (Khumbula ukuba uninzi lweempawu zeendawo zokuphuma ziye zaphuma njengomyalelo kwiimenyu zabo ezinqumlayo.)
Inkqubo yokubulala ngokungakhethiyo inokwenza ukuba iPC yakho ingasebenzi. Ayisiyonto eyoyikisayo, kodwa kuya kufuneka uphinde uqalise iiWindows (okanye usete yonke iPC) ukuze uphinde ufumane ulawulo.
thenga i-norco 10 325
iziphumo ebezingalindelekanga ze-cetirizine
yeyiphi mg engena kwi-valium
i-guaifenesin umthamo wezinja
yeyiphi eyomeleleyo ativan okanye xanax
Ungazenza njani iithowuni zokukhala ze iphone